Fiantohana kalitao - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Fumax dia namorona andiana fomba fitantanana sy fomba fiasa hiantohana ny fandefasana ny vokatra mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fahatsapana ny vokatra rehetra avy amin'ny fisafidianana ireo mpamatsy, ny fizahana WIP, ary ny fizahana ivelany mankany amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Ireto misy ohatra vitsivitsy:
Fanombanana sy fanaraha-maso ireo mpamatsy anay
Ireo mpanome dia tsy maintsy dinihina alohan'ny fankatoavana avy amin'ny ekipa fanombanana mpamatsy an'i fumax. Ho fanampin'izay, ny Fumax Tech dia hanombana sy hanome ny laharam-pahamehana ny mpamatsy tsirairay indray mandeha isan-taona mba hanomezana toky ireo mpamatsy hanome ny fitaovana ilaina amin'ny fumax. Ankoatr'izay, ny Fumax Tech dia mandroso hatrany ny mpamatsy ary mampiroborobo azy ireo hanatsara ny kalitao sy ny fitantanana ny tontolo iainana mifototra amin'ny rafitry ny ISO9001.
Famerenana ny fifanarahana
Alohan'ny hanafarana kaomandy, ny Fumax dia handinika sy hanamarina ny zavatra takian'ny mpanjifa hahazoana antoka fa manana ny fahafaham-po hanome fahafaham-po ny zavatra takian'ny mpanjifa ny Fumax ao anatin'izany ny famaritana, ny fandefasana ary ny fitakiana hafa.
Fanomanana, famerenana ary fanaraha-maso ny torolàlana momba ny famokarana
Fumax dia hanombatombana ny fepetra takiana aorian'ny fahazoana ny angon-drakitra momba ny famolavolana ny mpanjifa sy ny antontan-taratasy mifandraika amin'izany. Avy eo, ovao ny datum famoronana ho lasa datum famokarana ataon'ny CAM. Ary farany, ny MI izay mampiditra ny firaketana momba ny famokarana dia hamolavola araka ny fizotry ny fumax sy ny teknolojia. MI dia tsy maintsy averina dinihina aorian'ny fanomanana ataon'ny injeniera tsy miankina. Alohan'ny hamoahana ny MI, dia tsy maintsy dinihan'ny injeniera QA ary ankatoavina. Ny fandavahana sy ny fitetezana datum dia tsy maintsy hamafisina amin'ny fizahana lahatsoratra voalohany alohan'ny namoahana azy. Raha atao teny iray, Fumax TechTechmakes manao fomba hanomezana toky fa marina sy marina ireo antontan-taratasy famokarana.
IQC fanaraha-maso miditra
Ao amin'ny fumax, ny fitaovana rehetra dia tsy maintsy hamarinina ary ekena alohan'ny handehanana any amin'ny trano fitehirizana. Fumax TechTechestablishes dia manamarina ny fomba fanamarinana henjana sy ny torolàlana miasa mba hifehezana ny fidirana. Ankoatr'izay, ny Fumax TechTechown dia manana fitaovana sy fitaovana fanamarinana marim-pototra isan-karazany mba hiantohana ny fahafahan'ny mpitsara mitsara raha tsara na tsia ireo fitaovana voamarina. Fumax TechTechapplication rafitra informatika hitantanana fitaovana, izay manome antoka fa ampiasain'ny voalohany-amin'ny-voalohany-mivoaka ny fitaovana. Rehefa manakaiky ny daty famaranana ny fitaovana iray dia hamoaka fampitandremana ny rafitra, izay miantoka fa ireo fitaovana dia ampiasaina alohan'ny fahatapahana na hamarinina alohan'ny hampiasana azy.
Fomba fanaraha-maso ny fanamboarana
Torolàlana momba ny famokarana havanana (MI), fitantanana sy fikojakojana ny fitaovana tanteraka, fanaraha-maso sy fanaraha-maso WIP henjana ary koa torolàlana miasa, ireo rehetra ireo dia mahatonga ny fizotry ny famokarana manontolo ho voafehy tanteraka. Fitaovana fanaraha-maso marimarina isan-karazany ao anatin'izany ny rafitra fanaraha-maso AOI ary koa torolàlana fanaraha-maso WIP tonga lafatra sy drafitra fanaraha-maso, ireo rehetra ireo dia manome antoka fa ny vokatra semi-vokatra sy ny vokatra farany, dia mahatratra ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Fanaraha-maso farany sy fanaraha-maso
Amin'ny fumax, ny PCB rehetra dia tsy maintsy mandalo ny fitsapana misokatra sy fohy ary koa ny fizahana maso aorian'ny fizahana ny fizahana ara-batana.
Fumax TechTechown dia manana fitaovana fanandramana mandroso isan-karazany ao anatin'izany ny AOI Testing, X-ray inspection ary In-Circuit Testing ho an'ny fivoriana PCB vita.
Fanaraha-maso sy fankatoavana mivoaka
Fumax TechTechsets dia miasa manokana, FQA hijerena ireo vokatra arakaraka ny mason'ny mpanjifa sy ny takiana amin'ny alàlan'ny santionany. Ny vokatra dia tsy maintsy ekena alohan'ny famonosana. Alohan'ny hanaterana azy, ny FQA dia tsy maintsy manisa 100% isaky ny fandefasana ny isa ampaham-panamboarana, ny isan'ny ampahan'ny mpanjifa, ny habetsany, ny adiresy alehany ary ny lisitry ny fonosana sns.
Fumax TechTechsets dia manangana ekipa serivisy ho an'ny mpanjifa matihanina mba hifampiresaka am-pahavitrihana amin'ny mpanjifa sy hifanaraka amin'ny valin'ny mpanjifa. Raha ilaina dia hiara-hiasa amin'ny mpanjifa izy ireo hamaha ireo olana mifandraika amin'ny tranokalan'ny mpanjifa. Ny Fumax TechTechis dia miahiahy fatratra ny filan'ny mpanjifa ary manadihady tsindraindray ny mpanjifa hahafantarana ny zavatra takian'izy ireo. Avy eo ny Fumax TechTechwill dia manitsy ny serivisy ho an'ny mpanjifa ary manamboatra ny vokatra mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa
◆ Fomba famokarana RoHS feno
◆ Fanaraha-maso kalitao tanteraka
◆ Antoka azo antoka 100%
◆ Fitsapana herinaratra 100% (herinaratra ary fitsapana fohy)
◆ Fitsapana miasa 100%
◆ Fitsapana rindrambaiko 100%
◆ Fivoriambe, fametahana marika ary famonosana ny tabilao na ny rafitra arakaraka ny fonosan'ireo mpanjifa fepetra takiana
◆ Azontsika atao ny manao fanandramana miasa ho an'ny tabilao na ny rafitra arakaraka ny torolàlana momba ny fitsapana ny mpanjifa, ary afaka manome tatitra famintinana fitsapana izahay mba hanampiana ny mpanjifa hahita ny loharanon'ny tsy fahombiazana.
◆ Fiantohana mandritra ny androm-piainana
◆ Tontolo iainana azo antoka ESD
◆ Fonosana sy fandefasana entana azo antoka ESD
◆ ISO9001: fanamarinana 2008